Qaab DVD waa mid ka mid ah qaabab ugu caansan oo loo isticmaalo dunida oo dhan iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in users ah ma aha oo kaliya jecel inay u ciyaaraan qaab laakiin waxaa jira aan la tirin karin CD ayaa waxaa suuqyada iyo dukaamada kaa caawin yahay dadka in daawashada filimaanta iyo bandhigyada jecel ay si fudud ku qanacsan tahay. Xitaa guriga users ah Cunid ciyaaro DVD videos ka dib markii lagala dhex torrent xoogaa ama torrent u. Oo sidaas daraaddeed loo baahan yahay ee saacaddii waa in daaha in dhammaan faylasha kuwaas ciyaari karaa si fudud.
Qeybta 1: Maxaad Windows Media Player ma ciyaari karo DVD aad?
Qeybta 2: DVD gartaan qalabka Popular
Qeybta 3: Ku xiridda DVD Power ah
Qeybta 4: Beddelaan DVD daaqadaha Media Player qaab socon
Waxaa mar kale waa mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee ay jiraan jawaabo dhowr ah oo weyn oo arrinta ugu wajahay arrintan la xiriira waa in user a ma ciyaari karo files marka DVD decoder ah socon aan la rakibay. Qaladka jirtey in DVD decoder ah socon aan la rakibay oo sidaas daraaddeed arrinta la soo wajahay.
Si loo hubiyo in arrinta la xaliyey iyo user waa in ay si buuxda uga faa'iideysan doonaan khayraadka windows media player inuu u ciyaaro files DVD tutorial tani ayaa loo sameeyey si loo hubiyo in ay awoodaan in ay ugu fiican oo gobolka ka mid ah habka farshaxanka iyo DVD gartaan qalabka rakiban yihiin si user ah ka heli kartaa faa'iido buuxda ee la isticmaalayo hawlaha DVD loo maqli karo. Qodobka ugu muhiimsan waa in la ogaadaa waa in xitaa haddii qaab DVD ayaa loo saxay qaab la heli karo gudahood weli user ma awoodi doonaan inay ku ciyaaraan files sida decoder DVD ah waa lagama maarmaan si loo hubiyo in faylka ama DVD yahay ciyaaray qaab ee CD. Maqnaashaha DVD decoder ma aha oo kaliya waxay keeni doontaa in arrimaha laakiin waxay sidoo kale xaqiijin doonaan in xaalada ayaa ah mid aan marnaba lagu xalin arrintan la xiriira. Sidaas jawaabta su'aasha kor ku xusan ee qofka in aan heli karo ee ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira sida decoder ah DVD aan la rakibo iyo qaabka file loo baahan yahay oo aan lagu taageeray by windows media player ah.
Part2: DVD gartaan qalabka Popular
Waxaa jira dad badan oo gartaan qalabka DVD in user a soo bixi kartaa si aad u hubiso in dhibaatada la xalin iyo loo maqli karo DVD waxaa ku riyaaqay. Si kastaba ha ahaatee tutorial this Hubi in ka dhigi doonaa in 2 sare DVD gartaan qalabka waxaa lagu soo bandhigay kuwaas oo ah sida soo socota:
DVD Power decoder ee ay Cyber ​​Link oo laga heli karo http://www.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/features_en_US.html?&r=1
Pack codec Decoder horumariyo by shirkadda magaca la mid ah oo laga heli karo http://download.cnet.com/Codec-Decoder-Pack/3000-13632_4-75587126.html
Qaybta dambe ee tutorial inay hubiyaan in user helo aragti ah fikirkaaga ku aaddan dajinta, shaqada iyo rakibida decoder ee DVD Power sida ay tahay decoder ugu caansan DVD in loo isticmaalo iyo adeegsadaa si loo hubiyo in user marnaba wajahaya ka dhigi doonaa arin kasta ee la xiriirta file DVD ciyaaro badan Media Windows ka Player.
Part3: Ku xiridda DVD Power ah
Geedi socodka waa in la raaco ayaa ku qoran sida hoos ku qoran:
User 1. baahan yahay in ay soo booqdaan URL http://www.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/features_en_US.html?&r=1 si loo hubiyo in link download waxaa shaaca ka qaaday:
2.Free maxkamad download ka dibna in la riixi soo bixi faylka:
File 3.Beerta yahay si ay u badbaadaan in desktop ka dibna toogasho si dajinta bilaabo. User waxa uu leeyahay in la qeexo file badbaadiya caga sidoo:
4.Once file ayaa lagala soo bixi user waa in ay hubiyaan in la rakibo waxaa loo sameeyaa by double magcaabo file ka dibna ay hubiyaan in nidaamka dib ayaa loo bilaabayaa si loo dhamaystiro hawsha si buuxda sameeyo. Ciyaaryahanka Media ayaa hadda awood u yeelan doonaan in la hubiyo in file DVD la ciyaaray aan arin kasta.
Part4: Beddelaan DVD daaqadaha Media Player qaab socon
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo habka ugu isticmaalay taas oo ka dhigaysa hubiyo in DVD aan la soo ciyaaray oo kaliya laakiin qaabka la xiriira waxaa sidoo kale diinta qaar kale oo ay taageerayaan windows media player ah. Si loo hubiyo in arrinta la xaliyey tutorial this hubiyo in gobolka video convertor tahay sida Wondershare Video Convertor Ultimate la soo bandhigo si user ah ka dhigi kara isticmaalka ugu wanaagsan ee technology dhisay in barnaamijka uu leeyahay ka dhigi doonaa Waxaa la soo saaray by Wondershare si loo hubiyo in haddii arrinta waxay dhacdaa markii kale ka dibna convertor la joogo ma jiro si ay u caawiyaan soo baxay dadka isticmaala ee arrintan la xiriira. Tallaabada ugu by habka tallaabo in la soo socoto Screenshot ka dhigi doonaa hubiyo in user wuxuu noqonayaa ogyahay xaqiiqda ah iyo inuu xaqiijiyo in qaab DVD socon la ciyaari windows media player ah oo aan wax arin ah oo adag. Waxa intaa dheer in fasalka ee barnaamijka waa in ay u saamaxdo user si loo hubiyo in ku dhowaad 150+ qaabab loo rogaa si kasta oo kale oo user sidoo kale helo xal iyo maaraynta arrinta ka mid ah arimaha ay caan ku tahay nooca sida ugu Shirkadda taageertaa badan oo bulshada online arrintan la xiriira iyo sidoo kale.
Geedi socodka dhamaystiran in ay xaqiijin doonaan in xal arrinta lagu Xusi, sida soo socota:
1. URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html waa in la browsed si loo hubiyo in barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay u user. Waa la dili sidoo:
2.Beerta user markaas u baahan yahay in lagu daro files si interface ugu weyn ee ay ku khasbaan ku darto files badhamada arrintan la xiriira in ay sii wadi:
Qaab saarka 3.Beerta waxaa markaas waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in qaab ah in waxa taageeray windows media player la soo xulay in ay sii wadi:
4.In tallaabadii u dambaysay user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in button diinta ku yaal oo ku sii adkeeyey si ay u hubiyaan in qaab beddelidda ee bilowday file ah oo arrinta ku saabsan guud ahaan loo maqli karo DVD la xalin ee buuxa:
Part5: Isbarbar Table
Uqaabeeyaan iyo hababka
Easy ama adag
DVD Power Way adag tahay Ma deggan mararka qaarkood
Wondershare Video Convertor Ultimate Mid aad u fudud in ay hirgeliyaan Aad Xasilloon
Laga soo bilaabo miiska ka sarreeyo waxaa laga arki karaa in Wondershare video Convertor Ultimate waa software ugu fiican si loo hubiyo in DVD la ciyaaray. Sababaha ku xusan sida under:
Waa mid aad u fudud in ay fuliso sabab u ahaa xaqiiqada ah in interface waa user saaxiibtinimo iyo Wondershare laftiisa ayaa u xaqiijiso in uu hayaa fudud oo mana ayna badalin inkastoo of updates in loo xiraa arrintan la xiriira.
barnaamijka waa mid adag maadaama ay hubineysaa in gobolka updates tahay in lagu sii daayo shirkadda la fuliyo markii gudahood ah si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo arrinta kama dambaysta ah ee xasilooni la xalin mar oo dhan.
> Resource > WMP > 2 siyaabaha aad ku ciyaari DVD la Windows Media Player